Tonga ny Thunderbird! Ny endri-javatra sasany dia mpamono olona, ​​ny hafa kosa tokony hovonoina! | Martech Zone
Tonga ny Thunderbird! Ny endri-javatra sasany dia mahafaty, ny hafa kosa tokony hovonoina!
Alakamisy, Aprily 19, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Omaly alina dia nameno entana aho Mozilla Thunderbird hizaha toetra azy. Thunderbird dia Firefox's zanak'olo-mpiray tam-po… ny mpanjifa mailaka. Raha vantany vao nisintomana lohahevitra iray na roa aho ary nanova ny safidiko rehetra, dia azoko tsara ilay izy. Izy io dia mpanjifa mailaka tsara tarehy, miaraka amin'ny endri-javatra fanampiny amin'ny fampidirana sy tagging Gmail.
Ny tagging dia ny fahaizana mandatsaka teny fanalahidy sasany izay noforoninao ka manendry azy ireo amin'ny zavatra hafa, amin'ity tranga ity dia mailaka. Io dia ahafahanao mitady sy mahita zavatra mora amin'ny tag nomena anao. Endri-javatra mahafinaritra… ny tagging dia zavatra hitantsika betsaka tato ho ato amin'ny Internet (tiako ny mampiasa Del.icio.us famantarana ny URL).
Misy fiasa iray hitako tao amin'ny Thunderbird izay nahatonga ahy ho adala, na dia… ny sarintany raha manafatra ny Book Address. Ny interface dia tsy misy ilana azy ary mahasosotra tsy misy farany.
Raha hanao sarintany an-tsaha dia misafidy ny saha amin'ilay rakitrao ianao ary mamindra azy miakatra na midina hampifanaraka azy amin'ilay saha ao amin'ny Thunderbird. Ny olana fotsiny dia rehefa mihetsika ambony na midina ny sahaninao dia mamindra ilay saha teo am-boalohany ny lalana. Indraindray, izy io koa dia nanao tahaka ny saha tamin'ny fahitako azy. Tsy azoko antoka hoe iza no nieritreritra an'ity tetika ity fa mampihomehy. Tokony ho efa nanana boaty mitambatra niaraka tamin'ny saha Thunderbird tao izy ireo. Rehefa misafidy ny saha tsirairay avy amin'ny rakitrao loharano ianao dia tokony ho afaka misafidy ny saha Thunderbird hametrahana azy io.
Thunderbird, azafady vonoina ity interface mahatsiravina ity. Taty aoriana dia nilavo lefona tamin'ny fanafarana ny saha rehetra nataoko ary ny anarana sy ny adiresy mailaka fotsiny no nafarana. Raha misy mpivarotra angon-drakitra manana traikefa momba ny angon-drakitra orinasa tsy afaka mametraka sarintany, dia heveriko fa vitsy ny olon-kafa mahita izany mora ampiasaina. Raha tianao ny handray ny mpanjifan'ny mailakao ny olona dia tokony ho azonao antoka fa afaka mamindra mora foana ny boky adiresin'izy ireo amin'ny mpanjifa iray hafa izy ireo. Tsy afaka natao izany.
Tsy misy fanomezana tsara kokoa noho ny andro nahaterahana! Mpamaky fahana 500!
Afaka manangana lohahevitra WordPress ve ity lehilahy ity sa Inona ?!
Apr 19, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Whoop-dee-doo lehibe 🙂 Niezaka ny TB aho nandritra ny fifandraisany rehetra ary mbola tsy nahita zavatra mendrika hifikirana mihitsy; fa avy eo tsy mpankafy FF koa aho.
Rehefa namaky aho fa hanampy izy ireo a tagging lafin-javatra nanana fanantenana lehibe aho satria ity dia zavatra iray izay nahazatra ahy tamin'ny tag amin'ny FeedDemon sy Technorati. Na izany aza, ilay antsoin'ny TB hoe tagging dia tsy mihoatra ny fiovana kely fotsiny amin'ny sainam-pirenena mahazatra na rafitra sasany.
Raha nampiharina ny tena fiheverana momba ny tagging dia tokony ho azonao noforonina ho zana-lahatahiry ary / na hifaneraserana amin'ireo zana-kazo noforonina izay azo ampifandraisina ao amin'ny rafitry ny fitsipika.
tsy midika akory izany fa mampiasa ny kinova farany an'ny mpanjifa MS ihany koa aho. Nahita ny safidiko ny fandaniako $ 20.00 ho an'ny InScribe (kinova Linux ary miampy port Mac ho avy) ary tsy niherika intsony aho nanomboka teo.
Apr 19, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Tena mpankafy FF aho. Raha manao programa web ianao dia mahafinaritra ny FF. Ireo fanampiana ho an'ny Firebug sy Live HTTP Headers dia tsy voavidim-bola ary nanampy ahy hamoaka taonina. Vao avy nametraka add-on vaovao aho izay ahafahako mamerina manoratra ireo tranokala miaraka amin'ny CSS ahy manokana… mahafinaritra be izany.
Omeo fotoana i Firefox! Afaka mandray na miala amin'ny Thunderbird aho, na izany aza. Hihazakazaka mandritra ny fotoana fohy aho ary hitatitra indray raha mahita fahasamihafana hafa mahafinaritra aho.
Apr 19, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Doug .. Efa nanandrana FF imbetsaka aho. Izaho aza efa nametraka azy fa tsy tiako fotsiny. Izaho dia mandroaka azy io raha tsy misy antony hafa ankoatry ny hahazoana antoka fa vaovao io.
Tsy milaza aho hoe tsara kokoa na ratsy kokoa ny IE7 fa io no mpizaha tena lehibe indrindra ahy.
Tsy misy afa-mandositra ny Borg, Steven. Ho faty ianao na ho ela na ho haingana. 😉